I-Semalt Izabelo zeengcali Isikhokelo sokungabandakanyi iiBots zophando kunye neeSpider ukusuka kwiiNgxelo zeGoogle Analytics
Ingxelo yeGoogle Analytics malunga ne-traffic traffic iyinzuzo kumnini wewebhu. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kungabikho imfazwe engapheliyo phakathi kokulungileyo nokubi. Abanye abantu abanokungaqondi ukuba ezinye zeedatha zedatha ziquke kwiNgxelo yeGoogle Analytics zivela kumarobhothi. I-bots nee-spider zikhokelela kwiingxelo zeenkcukacha ze-GA. Banako ukuphazamisa indlela idatha ebonisa ngayo eyona nto ingonakalisa impilo yephulo lokuthengisa kunye nezigqibo ezilandelayo.
Nangona kunjalo, abanikazi beendawo akufanele bakhathazeke kakhulu kuba kukho indlela yokufumanisa kunye nokulahla i-traffic eyenziwa zizigolisi kunye ne-bots. Kuthetha ngoko ukuba ulwazi olubonelelwe yiGoogle Analytics luya kuba luncedo ngakumbi emva kokuphunyezwa kwale mi sebenzi. Akukho ndlela ethile yokuthintela ibhod ye-spam ekufikeleleni kwiwebhusayithi. Nangona kunjalo, kukho indlela abasebenzisi abanokuyenza ngaphandle kogaxekile kunye nokukhangela i-traffic bot kwiingxelo. Ipesenti enkulu yale mibhobho iyakwazi ukufumana ezi ndlela.
Ukulandela isikhokelo sokuphunyezwa kwi-Jason Adler, ingcali ehamba phambili ye-12 (Semalt , enye inokunyusa inani kunye nokuthembeka kwenani elongezelelweyo lokutyelelwa.
Ukusebenzisa ulwazi oluvela kwingxelo yokukhululeka kwe-bot kwenza ukuba kuthembeke ngakumbi. Kwakhona, kuvumela umnini ukuba avumele iipulatifomu zezivakashi. Iintlanzi kunye namathanjeni zibonakala zicacile kwaye zicacile ngaphakathi kwegrafu ezidalwe.
Indlela yokukhupha i-Bots Engine yeBots kwi-Google Analytics
Ngoku kunokwenzeka ukucoca idatha yedatha kwiwebhsayithi, ukubona ukuba yeyiphi na evela kwimisebenzi yabantu yendalo kunye nezinto ezivela kugaxekile kunye nokukhangela ibhola. Amandla okwenza oku aphezu komsebenzi wokukhuphela zonke iinqwelo ezivela kwi-bots nezigolisi ezaziwayo. Yibhokisi lokukhangela ngaphakathi kwinqanaba lomlawuli kwi-GA.
Amanyathelo okulandela ukukhupha zonke iibhothi kunye namaqabunga awaziwayo
1. Yakha umbono "wokuvavanya" kwi-Google Analytics
Ivumela umsebenzisi ukuba enze utshintsho abayifunayo ngenkathi egcina ingqibelelo yedatha yabo yasekuqaleni kwimbono yomphathi. Isebenza njengomthombo wokuthelekisa ukuze umninimzi angakwazi ukuchonga utshintsho olwenzekayo emva kokukhutshwa. Ngeziphumo eziyanelisayo, ngoku ungabandakanyi i-bots ukusuka kwimbono ephambili.
2. Ukuphelisa iibhokhwe kunye neziqhenqa
Hamba kwinqanaba le-Admin yeThuluzi le-Google Analytics, khetha izicwangciso zokujonga kwaye ukhangele inketho yokukhupha zonke iifayile kwi-bots kunye nezicabungulu. Emva kokugqiba oku, i-traffic manje iya kukhululeka kuzo zonke i-traffic search kunye ne-spam bot traffic, okwenza kube lula kwaye kucacile ukunika ingxelo kwizithuthi zabantu.
3. Bhengeza kwi-Google Analytics
Yenza izichaso kwiigrafu zeGRA ukuba uthathe ingqalelo nayiphi na inkunkuma yezothutho emva kokuphunyezwa kwe-bot bot excluation.
Omnye unokujonga izitampu zezithuthi, zonke ezixhomekeke kwisixa seendlela ezenziwe ngumbhobho. Umbono wokuvavanya kunye nombono wenkosi kuya kunceda ukujonga apho i-traffic ithinciphisa ukwenza ingxelo engathembekiyo Source .